Barcelona oo xiiseynaysa daafaca kooxda inter Alessandro Bastoni.
Arsenal oo bartilmaameed ka dhigatay qadka dhexe Rennes Eduardo Camavinga.
Home Suuqa kala iibsiga Barcelona oo xiiseynaysa daafaca kooxda inter Alessandro Bastoni.
Barcelona ayaa xiiseyneysa inay la soo saxiixato daafaca Inter Alessandro Bastoni, sida laga soo xigtay Calciomercato kooxda blougrana ayaana dhibaato daafac dhexda kaga jirta Sanadihii lasoo dhaafay.
Kooxda reer Catalan ayaa doonaysa inay la soo wareegaan daafaca dhexe ee da’da yarka ah muddo dheerna ciyaari kara waana bastoni oo 21 jir ah oo u dhashay wadanka talyaaniga.
Si kastaba ha noqotee, Inter ayaa ka caga jiideysa inay u ogolaato ciyaaryahanka inuu baxo waxaana ay ugu yaraan labo jibaari doonaan 30 milyan euro (£ 26m / $ 36m) oo ay Atalanta ka siisay Bastoni seddex sano ka hor.
Previous articleKa hor kulanka adag ee chelsea iyo man united Thomas Thuchel oo ka hadlay Werner.
Next articleMark Lawrenson oo shaaca ka qaaday saadaashiisa Chelsea FC v Man United
Kooxaha chelsea iyo manchester city oo caawa ciyaari doonaan Semi Finalka...
Wararka Ciyaaraha Maanta2631